Maitiro ekuti ubudise zvakare ambient ruzha yekuvandudza kusangana | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuberekazve ambient ruzha yekuvandudza kusangana
Vazhinji vedu tinoda kugara tichirira kumashure, kungave kugona kuisa pfungwa kana kukotsira. Mumazuva ekare izvo zvaiitwa nekuisa redhiyo kana terevhizheni, uye munguva pfupi yapfuura, nekuda kwemasevhisi akaita seSpotify, mumhanzi. Asi, iyeNyanzvi dzinoita senge dzinobvumirana kuti imwe mhando yeruzha, kungave kwakatangira nemasikirwo akadai sekurira kwemvura kana gungwa kana chakagadzirwa senge icho chechitima, ndege kana hurukuro dziri muchitoro, cvanoumba sarudzo iri nani.
Handina chokwadi chekuti nei ichishanda, ini ndinongoziva kuti zvinondishandira. Tsananguro dzakanakisa dzandakawana dzaive dzeyedzidzo nyanzvi Paul scheele iyo yatakataura nezvayo panguva iyoyo muLinux Vakapindwa muropa. Scheele anoti kana tikatarisisa chegumi checheso chedu pane chimwe chinhu, zvichave nyore kutarisisa zvakasara zvegumi-chegumi pane chimwe chinhu.
Zviripachena kuti neredhiyo kana runyorwa rwune nziyo dzatinoda, isu tinopedzisira tave kudzosa kutarisisa kwakawanda kune kumashure manzwi kupfuura isu isu.
1 Gadzira uye ubudise ambient ruzha uchishandisa mafomu
2 Nezve ruzha
3 Kwatinowana mamwe manzwi
Gadzira uye ubudise ambient ruzha uchishandisa mafomu
Iri svondo, inongowanikwa chete kuUbuntu uye zvigadzirwa, Yakave iine isu kwemakore akati wandei uye ichienderera ichivandudzwa sezvo ini ndiri kushandisa iyo vhezheni yeHirsute Hippo iyo inobuda pakupera kwemwedzi. Kujekeswa. Kuwedzeredzwa kweGNOME kunofanirwa kubvumidza kudzora chirongwa kubva kubhawa yepamusoro hakuwanikwi, nekudaro, kuti unzwe kutinhira, uchafanirwa kuchengetedza iro diki diki hwindo.
Chirongwa ichi chinounza mashoma mashoma ruzha, asi mune imwechete ppa repository iwe une vamwe vakapihwa nenharaundad. Mushanduro dzapfuura pakanga paine mukana wekupinza yako mhere, asi mune yazvino handisi kuiwana
Mhere dzinotambika dzinosanganisira mhuka, zvisikwa, chena uye shava ruzha, zvigadzirwa, uye nharaunda.
Tinogona kuisa chirongwa ichi nemirairo:
Patinovhura chirongwa tinowana hwindo diki iro nInokupa iwe zita reruzha uye chiratidzo chinomiririra, nemiseve yepadivi yatinogona kuchinja pakati pemitinhimira. Chokwadi chinonakidzante ndeyekuti kana iwe ukachinja ruzha runochinja iyo icon mune yepadivi bar.
Mune iyo Edit menyu iwe unogona kuwana izvo zvaunofarira zvinotarisa kuti inguva yakareba sei kurira ruzha uye kana chirongwa ichi chikatanga neUbuntu.
bhurangeti ine iri nani interface uye yakajeka nzira yekuberekesa yako wega mafaera. Izvi zvinogadzira iyo yekuti yavo katarogu haina kukwana seyaAntoise.
Imwe poindi inofarira Blanket ndeyekuti inowanikwa yeArch Linux, Fedora, Ubuntu uye openSUSE, iwe unogona zvakare kuibatanidza kubva kunobva kodhi. Mu GitHub peji zvepurojekiti iwe unowana zvinokodzera zvinongedzo nemirairo.
Iyo purogiramu inopa ruzha rwakakamurwa muzvikamu zvina:
Zvisikwa: Mvura, dutu, mhepo, mafungu, rwizi, shiri uye husiku hwezhizha.
Kufamba: Chitima, ngarava uye guta.
Mukati: Kudya, choto.
Mheremhere: Muchena, pingi
Iko kune zvakare chikamu chemanzwi kubva kwedu kuunganidzwa.
Kana isu tavhura chirongwa isu tinowana runyorwa rwemheremhere inotungamirwa nezvikamu zvataurwa pamusoro. Ruzha roga roga runoperekedzwa neaconic icon uye inotsvedza inoisa vhoriyamu yayo. Izvi zvinoita kuti zvikwanise kugadzira musanganiswas. Kana ruzha ruchirira, ruvara rwechiratidzo runochinja.
Bhurangeti rinotibvumira ramba uchiteerera kurira kunyangwe chirongwa chikavharwa uye chichiita kuti chitange kumashure apo patinopinda mukugovera kwedu
Muzvikamu zvakasiyana zvechinyorwa isu tinotaura nezve chena, pingi uye shava ruzha. Musiyano uyu unotevera:
Chiratidzo cheruzha chine zvese mafambiro uye chinovaburitsa nesimba rakafanana. Ruzha ruchena runokonzeresa kuti chikamu chekunzwa chisvike pakumhanya kwazvo, zvichidzivirira zvakanyanya kukurudzira kubva mukubata cortex yemukati.
Ruzha rwepingi: Irwo ruzha rune chiratidzo chinoumbwa nemitengo yakasarudzika asi iine hushoma hushoma pakati penzvimbo.
Ruzha rweBrown: Ruzha urwu rwune zvakawanda wanda… zvirimo mumatanho akaderera pane ari ma frequency akakwirira.
Kwatinowana mamwe manzwi
YouTube inzvimbo huru yekuchengetedza ruzha, zvese zvakasikwa uye zvemidziyo uye nzira dzekutakura. Nezvishandiso zvakaita seYotube-DL unogona kudhawunirodha odhiyo woiisa muBlanket kana kuishandisa neyaunofarira mutambi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekuberekazve ambient ruzha yekuvandudza kusangana
Kana zvichitaridzika kune mumwe munhu kuti atore kurodha application kungo ridza gumi nemaviri mutinhimira muchiuno, zvakakodzera kuyeuka kuti izvi zviripo mu https://github.com/rafaelmardojai/blanket/tree/master/data/resources/sounds kuvateerera pane chero mutambi.
Ndatenda neruzivo. Asi, iwe unofanirwa kuchengeta mutambi achivhura uye, kana iwe uchida kuti itambe kana iyo sisitimu yekushandisa yatanga, iwe unofanirwa kugadzira script inotangisa mutambi uye inoridza iyo yakatarwa iyo faira iwe. Zvakare, haugone kusanganisa ruzha nemavhoriyamu akasiyana kunze kwekunge wavhura maviri mutambi windows.
Kupinza kwakanaka, usambofa wakatora chena / pingi ruzha zvakanyanya kusvika wauda vhiki rapfuura.
Manjaro ichagadzira "Ubuntu" uye ichagara muGNOME 3.38 kwechinguva, asi zvishoma pane Canonical